Adeegga ugu Fiican iyo Bixiyaha | Hongyu
Sannadkii 2013, Bandhigga Sano ee Mareykanka wuxuu soo saaray Laser -ka, picoSure 755nm rugta laser labaad oo leh 755nm mowjadaha.
Sannadkii 2015, wuxuu shahaado ka qaatay NMPA -ga Shiinaha. Dhererka hirarka 755nm wuxuu leeyahay shaqo nuugid xulasho wanaagsan oo melanin ah, iyo saamaynta ka saarida walxaha jirka waa mid aad u fiican.
Bishii Diseembar 2017, NMPA ee Shiinaha ayaa loo oggolaaday daaweynta cudurrada nabarka midabka xun, iyo bishii Sebtember 2020 ee Shiinaha NMPA waxay oggolaatay daaweynta dhaawacyada midabka maqaarka.
Lens Focus Diffraction Focus, tamarta laser -ka ayaa si aad ah loo uruurin karaa, iyada oo aan waxyeello u geysanayn unugyada caadiga ah ee ka baxsan midabka, soosaarka saamaynta LIOB, waxay kicisaa dib -u -dhalashada kolajka, run ahaantii ma gaarto waqti dhimis.
PicoSure hive lesers-ka labaad waa FDA-NMPA laba-qodob oo la xaqiijiyay inay si badbaado leh oo wax ku ool ah uga saaraan laser ilbiriqsiyo maqaarka oo leh tattoos iyo chromatosis aan fiicnayn. Iyada oo ku saleysan mabda'a nuugista kuleylka xulashada, tikniyoolajiyadda caaryada qufulka ee haragga labaad ee gaarka ah ayaa loo adeegsadaa in lagu soo saaro saamaynta fotomechanic ee saldhigga midabka bartilmaameedka ee maqaarka iyadoo loo marayo hirarka 755nm ee u gaarka ah iyo muddada garaaca wadnaha oo aad u gaaban, si loo kala jaro walxaha midabka .
Qiimaha nuugista melanin ee hirarka 755nm ee ay soo saareen ulaha emerald ee xiisaha leh ayaa sarreeya, iyo marka lagu dhaqmayo walxaha midabka, aad ayaa loo bartilmaameedsadaa, sidaa darteed waxaa loo isticmaali karaa in lagu daaweeyo midabaynta dusha sare iyo midabka maqaarka, taas oo u baahan kaliya hal mowjad oo u dhiganta noocyo kala duwan ee nabarrada midabka caadiga ah. Isla mar ahaantaana, sababta oo ah nuugista melaninku way ka xoog badan tahay, ma dhaawici doonto unugyada kale ee caadiga ah, sidaa darteed daaweynta xanuunka hooseeya, jawaab -celinta iftiinka dambe.
Ballaca garaaca wadnaha oo aad u gaaban: Baaxadda garaaca wadnaha ee PicoSure waa 550-750ps, hal picosecond waa hal tiriliyan oo ilbidhiqsi, 10 laga jaray 3 ilbidhiqsi oo laba jibaaran, cilmi baaristu waxay muujinaysaa marka la barbar dhigo laser nanosecond, 755nm picosecond laser therapy waa ka gaaban, daaweyn yar, iyo qanacsanaanta bukaanka .
Dhererka Dheer ee Faa'iidada: Adigoo adeegsanaya laser pissar oo dhererkiisu yahay 755nm, dhererka mawjadu wuxuu nuugaa saddex jeer 108nm ee hirarka melanin, sidaa darteed falcelinta qalliinka kadib waa mid aad u fudud saamayntiisuna aad bay ugu fiican tahay waayo -aragnimada bukaanka.
Ballaca garaaca wadnaha oo lagu daray faa'iidada mawjadda: Sababtoo ah qiimaha nuugista sare ee 755nm melanin, kaliya cufnaanta tamar aad u yar oo lagu daray ballaca garaaca wadnaha labaad ayaa loo isticmaali karaa in lagu daweeyo midabaynta iftiinka ilaa mugdiga.
Gacanta Zoom ee Pigment Smart: Daaweyntu waxay u baahan tahay oo kaliya inay ilaaliso falcelinta dhibicda-dhamaadka, halkii ay ku tiirsanaan lahayd oo keliya xeerka cabbiridda, daaweynta saxda ah ee saxda ah.
Muraayadda hive -ga ee patent: Focus lens hive, oo ay weheliso hirar dhererkeedu yahay 755nm, waxay soo saartaa LIOB inta u dhexaysa epidermis -ka dhabta ah, kicinta wax -soo -saarka kolajka iyo dhallinyaranimada wejiga, farsamada maqaarka oo leh dhaawac aad u yar dareenka dhabta ah ee erayga asal ahaanna uma baahna wakhtiga dhimista.
Habka BOOST: Habka BOOST, baaxadda garaaca wadnaha ee PicoSure waxaa lagu cadaadin karaa 750ps ilaa 550ps, iyadoo kordhineysa cadaadiska waxyeellada illaa 70% iyo kala -goynta tattoos madax adag oo ay adag tahay in laga saaro.